​वामदेव गौतमलाई गौतमकै चुनौती : उनीसँग दम्भमात्रै छ, मसँग जनता छन्
Wednesday, 15 Nov, 2017 2:33 PM
बर्दिया क्षेत्र नं. १ को चुनावी भिडन्त कम रोचक छैन । भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा चर्चा गरिएका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम मैदानमा रहेकाले पनि चर्चा बढी नै भयो । अझ उनको प्रतिश्पर्धामा काँग्रेसले वहालवाला सिंचाइमन्त्री संजय गौतमलाई उम्मेदवार बनाएपछि टक्कर रोचक हुने भएको हो । दोस्रो संविधानसभामा बर्दिया र प्यूठानबाट निर्वाचित भएका वामदेवले उपनिर्वाचनमा प्युठान रोजेका थिए । तर, यसपटक फेरि बर्दिया नै झरे । तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको बर्दियामा अहिले २ वटामात्रै निर्वाचन क्षेत्र छन् । यसअघि वामदेव १ र संजय गौतम २ बाट विजयी भएका थिए । अहिले दुवै गौतमको विजयी क्षेत्र १ नम्बर मा परेको छ । दुवैको आधार क्षेत्र एउटैमा मिसिएपछि प्रतिस्पर्धा झन् कडा हुने पक्का छ । वामदेव बर्दियामा लोकप्रीय छन् । उनी बर्दियाबाट ३ पटक निर्वाचित भइसकेका छन् । उता संजयको लोकप्रियता पनि कम छैन । जिल्ला राजनीतिमा लामो समय बिताएका संजयको व्यक्तिगत सम्पर्क र पकड मजबुत छ । जनतासँग सहज पहुँचमा रहने संजयसँग सरल नेताको परिचय छ । भावी प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेका वामदेवलाई टक्कर दिइरहेका संजयसँग न्यूजसेवाले चुनावी अभियानवारे केही प्रश्न गरेको छ :
–बर्दिया क्षेत्र नं. १ मा काँग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार संजय गौतम
चुनावी प्रचार अभियान कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ ?
चुनावी प्रचार अभियान एकदमै राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ । साथीहरु निकै उत्साहित देखिनुभएको छ । अहिलेको परिस्थितीमा मेरो उमेद्वारीले बर्दियावासीमा उर्जा दिएको छ । नेपाली काँग्रेसमा अभूतपूर्व एकता पनि देखिएको छ । लोकतान्त्रिक गठवन्धनका साथीहरुले मलाई सहयोग गर्नु भएको छ । चुनावी अभियान विजयी दिशामा अगाडि बढेको छ ।
घर–दैलोलाई प्राथमिकता दिनु भएको छ कि आमसभालाई ?
घरदैलो त संभव देखिदैन । तर, पनि म अधिकांश गाउँबस्ती, वडा र साथीहरुको बिचमा पुग्ने प्रयास गरिरहेको छु ।
कस्ता विषयलाई चुनावी एजेण्डा बनाउनु भएको छ ?
पहिलो पटक संविधानसभाको सदस्यको रुपमा निर्वाचनमा म उम्मेदवार हुँदा जनतालाई संविधान र समृद्विको बाचा गरेकोे थिएँ । अहिले मैले आम बर्दियाली साथीहरुलाई तिनै कुराहरुको पुनःस्मरण गराइरहेको छु । हामीले जितेर गयौं भने संविधान दिन्छौ भनेका थियौं । संविधान निर्माण गर्न सफल भयौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको काँग्रेसको सरकारले संविधान निर्माण ग-यो । आधा यात्रा पुरा ग-यौं । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा हामीले खेल्नु पर्ने भूमिका सफलतापूर्वक बहन ग-यौं । त्यसपछि हाम्रो यात्रा समृद्विको लागि लक्षित थियो । हामीले संविधानको कार्यान्वयन सँगसँगै विकास निर्माण र यहाँका आवश्यकताहरुलाई संवोधन गर्नुपर्छ । गर्वका साथ भन्न सक्छु पछिल्लो कालखण्डमा मुलुकभरका विकसित केही निर्वाचन क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने बर्दियाको मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि अग्रपंक्तिमा आउँछ । मैले यहाँको विकास निर्माण, आवश्यकता र परिस्थितीलाई बुझेर अगाडि बढाएको छु । त्यसले आफ्नो गति लिएको छ । बर्दियाली जनता मसँग खुसी छन् । बर्दियाली जनताले मसँग आशा गरेका छन् । एउटा नयाँ संभावना देखेका छन् । उनीहरुले सोचे अनुसारले काम गरेकाले मैले फेरि एकपटक अवसर देउ भनेको छु ।
मतदाताले तपाईलाई सबैभन्दा धेरै सोध्ने प्रश्न र गुनासो के हो ?
जसलाई जिताएर पठायो उ फर्केर नआउने भन्ने नै यो क्षेत्रका जनताको मुख्य गुनासो छ । यहाँका पहिलाका जनप्रतिनिधिको चरित्र जनताले बुझिसकेका छन् । त्यसैले म अघिल्लो पटक विजय हुँदा जनतासँग सँधै जोडिएर बसेँ । फेरि पनि म उम्मेदवार बनेर आउँदा उनीहरुमा आशा जागृत गरेको छ । मैले जस्तो खालको भूमिका निर्वाहा गरेँ, जे प्रतिवद्वता गरेको थिएँ, त्यो पुरा गरेको छु । अहिले मसँग जनताको कुनै गुनासो छैन । मानिसहरुको मानवीय स्वभावअनुसार मबाट पनि केही भुलचुक भएको हुन सक्छ । तर, समग्र रुपमा हेर्दा मैले हरेक ठाउँबाट माया र सद्भाव नै पाएको छु ।
चुनावी घोषणापत्रबारे मतदाताहरुले कुनै जिज्ञासा राख्छन् ?
हिजो हामीहरुले बैचारिक यात्रा गथ्र्यौं । बैचारिक संवाद र छलफल गथ्र्यौं । अब नेपाली जनताले वास्तवमा समुन्नती, रोजगारी खोजेका छन् । हाम्रा युवाहरु जो कामको लागि बाहिर जान्छन्, उनीहरु कसरी हुन्छ यहीँ हुन्छ उद्योगधन्दा, कलकारखाना, बाटोघाटो होस् भन्ने चाहन्छन् । हामीले लेखेका कुराहरु, घोषणापत्रमा त्यति ठूलो चासो मैले पाईनँ ।
मतदाताको पहिलो रोजाई पार्टी हुँदो रहेछ कि उम्मेदवार ?
अहिले अलिकति केही परिवर्तन भएको छ । बीचमिा हामीले बैचारिक रुपले काम ग¥यौं । पार्टी पद्धतिले प्राथमिकता पाएको थियो । अहिले पार्टी मात्रै मान्छेले हेरेको छैन । व्यक्ति पनि हेर्न खोजिरहेको छ । भएका पार्टीहरुमा पनि राम्रो व्यक्तिले जितिदिए हुन्थ्यो भन्ने मतदाताहरुको चाहना छ । पार्टीगत नाममा मात्रै मतदान गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान विकसित भएजस्तो लाग्छ ।
मत माग्न जाँदा अन्य प्रतिस्पर्धीको आलोचनामा कत्तिको समय खर्चनुहुन्छ ?
मैले धेरै जोड आफ्नै कुरा राख्नमा दिन्छु । मेरो उमेद्वारी यसकारणले तपाईहरुलाई उचित छ र योग्य छु भनेर मतदातालाई सम्झाउँछु । प्रतिपक्षी र प्रतिस्पर्धीेबाट लागेको आरोप खण्डन गर्ने क्रममा मैले केही भन्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने म अरुको आलोचनामा समय खर्चने मान्छे होइन । मेरो त्यस्तो स्वभाव पनि छैन ।
अन्य उम्मेदवारहरुको चुनावीशैली कस्तो पाउनु भएको छ ।
मसँग प्रतिस्पर्धामा रहनु भएका आदरणीय वामदेवले जुन स्तरबाट चुनावी प्रचार गरिरहुनु भएको छ, त्यति स्वस्थ्य र सकारात्मक छैन । तर, त्यसलाई मैले पर्वाह पनि गरेको छैन । म संस्कार र संस्कृती बोकेको मान्छे, राजनीतिक ढंगले नै प्रतिवाद गरेको छु । मलाई त्यो उच्छृङ्खलता र अराजकता मन पनि पर्दैन । मैले आफ्नो कुराहरु सभ्य ढंगले नै प्रस्तुत् गरेको छु ।
कुन तप्का र वर्गका मतदाताबाट यहाँले बढी आशा गर्नु भएको छ ?
मसँग सबै बर्गका मान्छेहरु छन् । मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, दलित जनजातिका मान्छेहरुले पनि मलाई सहयोग गरिरहेका छन् । मध्यम वर्गीय मतदाताको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग छ । अझ विशेष गरेर युवाहरु मेरो पक्षमा देखिनु हुन्छ । महिला दिदीबहिनीहरुको सद्भाव र समर्थन उल्लेखनीय पाएको छु । मैले मेरो क्षेत्रमा जुन लहर आएको देख्छु, आत्मविश्वासलाई अझै उचो बनाएको छ ।
मेरो प्रतिस्पर्धा बामदेव जीसँगै हो । उहाँ एमालेका शीर्ष नेता मध्येकै हुनुहुन्छ । अब आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ । विभिन्न कालखण्डमा २२–२४ वर्षदेखि सत्तामा हुनुहुन्छ । ठूलो पदमा हुनुहुन्छ । उहाँमा एक खालको दम्भ पनि छ । म त भर्खर न हो । एक पटक चुनाव जितें । सकारात्मक भूमिका खेले । मैले काँग्रेस जिल्ला सभापतिको रुपमा काम गरें । जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरें । चाहे द्वन्द्वको बेला होस् या दुःखको बेला, सधैँ जनतासँग नै जाडिएँ । मलाई यहाँको ‘ग्रासरुट’का मान्छेहरुले माया गर्छन् भन्ने आत्मविश्वास छ ।
म यहिँ जन्मिए, हुर्कें, बढेँ, यहीँको माटोमा खेलेँ । राजनीतिक यात्रा यहीँबाट सुरु गरें । यहाँका हरेक समस्या र सम्भावनासँग परिचित छु । बर्दियाको समग्र विकासमा मेरो भूमिका छ । बाटोघाटो निर्माण, कर्णाली र बबई नदी नियन्त्रण, बबई सिंचाई आयोजनाको व्यवस्थापन, दैनिक जीवनसँग जोडिएका तमाम पाटोमा म जनताकै बीचमा छु । संविधान निर्माणमा पनि यादगार योगदान गरें । आम बर्दियाबासीले यो बिचमा मैले निर्वाहा गरेका हरेक क्रियाकलापको मुल्यांकन गरेका छन् । त्यसैले म बर्दियाली जनताको माझमा, मन–मुटुमा छु । यसपाली उहाँहरुको प्रतिनिधिपात्र मै हो । उहाँहरुले मलाई नै विजयी गराउनुहुन्छ भन्नेमा ढुक्क छु ।